အင်တာနက်ကိုဝန်ကြီးဌာနများ - ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုမျှော်လင့်ရန်
2 "ထိုသူတို့ကပေါင်မုန့်များ၏ကြေကွဲ၌၎င်း, ဆုတောင်း, တမန်တော် '' ဆုံးမဩဝါဒများနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ထဲမှာစေ့စေ့ဆက်လက်: 42 Acts ။
သီချင်းဆို: ကျနော်တို့တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသီချင်းခေါင်းဆောင်များကဦးဆောင်အတူတကွအများအပြားသီချင်းများနှင့်ဓမ္မသီချင်းနာသီချင်းဆိုပါမည်။ ဤရွေ့ကား (တူရိယာများ၏ပူးတှဲမပါဘဲ) တစ်ဦး capella သီဆိုလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပထမရာစုဘုရားကျောင်းများ၏ပုံစံအောက်ပါအတိုင်းနှင့်ဤကိုးကှယျခွငျးအဘို့အဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်အခွင့်အာဏာဂီတ၏တစ်ခုတည်းသောကြင်နာသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤထုံးစံ၌သီချင်းဆိုကြလော့။
ဧဖက် 5: 19 "ဆာလံသီချင်းနှင့်ဓမ္မသီချင်းနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာသီချင်းများထဲမှာတယောက်ကိုတယောက်စကားပြောသီချင်းဆိုနှင့်သခင်ရန်သင့်နှလုံးအတွက်သီချင်းဆိုအောင်,"
20 Acts:7"အခုတပည့်သည်မုန့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့စုဝေးသောအခါထိုရက်သတ္တပတ်၏ပထမဦးဆုံးနေ့၌ပေါလုသည်နက်ဖြန်နေ့၌ထွက်သွားဖို့အဆင်သင့်, သူတို့ကိုအားမိန့်များနှင့်သန်းခေါင်တိုင်အောင်သူ့သတင်းစကားကိုဆက်လက်။ "
1st ကောရိန္သု 11: 23-26 ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏သောအရာသခင်ဘုရားထံမှလက်ခံရရှိသည်: သူသစ္စာဖောက်ခဲ့သည့်အတွက်တူညီတဲ့ညဉ့်တွင်, သခင်ယေရှုခရစ်သည်မုန့်ကို ယူ. , သူကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှ, သူကိုဖဲ့ဟုအကြောင်း, "အစာစားကြလော့ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကျိုးပဲ့သောငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဘို့အတွက်ဒီလုပ်ပါ။ "ဟုအဆိုပါနည်းတူခုနှစ်တွင်သူလည်းဤခွက်ကားငါ၏အသွေး၌အသစ်သောပဋိညာဉ်ဖြစ် '' ဟု, ညစာစားပြီးနောက်ခွက်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ သူကလာမှီတိုင်အောင်ဤသည်ငါ့ကိုအောက်မေ့ဘို့အတွက်အဖြစ်ကိုမကြာခဏသင်ကမသောက်ရအဖြစ်လုပ်ပါ။ "အဖြစ်မကြာခဏသင်ဤမုန့်ကို စား. ထိုခွက်ကိုသောက်သကဲ့သို့, သင်တို့သည်သခင်ဘုရား၏အသေခံခြင်းကိုကြွေးကြော်။
ပေးခြင်း: ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကြွယ်ဝစွာကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီမင်္ဂလာရှိတော်မူကြောင်းကိုသဘောပေါက်, အသင်းတော်များ၏အလုပ်အတွက်တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုထိုရက်သတ္တပတ်၏အသီးအသီးပထမဆုံးနေ့ပေးပါ။ အဆိုပါဘုရားကျောင်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလိုအပ်ကြောင်းအများအပြားကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ထောက်ခံပါတယ်။
1st ကောရိန္သု 16:2"ဟုအဆိုပါသီတင်းပတ်၏ပထမဦးဆုံးနေ့တှငျသငျသညျတစျဦးစီကိုသူငါရောက်လာသောအခါမျှမ collection များကိုရှိကြောင်း, အကြံထမြောက်ရသောအစေခြင်းငှါအဖြစ်တက်သိုလှောင်, ဘေးဖယ်တစ်ခုခုကိုတင်ကြကုန်အံ့။ "
ကျမ်းစာလေ့လာမှု: ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ဟောပြောခြင်းမှတဆင့်, ဒါပေမယ့်လည်းကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သင်ကြားမှုမှတဆင့်သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာမှုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံ။
2nd တိမောသေ 4: 1-2 "ငါသည်သူ၏ထင်ရှားကျော်ကြားသောနှင့်သူ၏နိုငျငံသညျမှာလူနေမှုနှင့်သေလွန်သောသူတို့သည်တရားစီရင်မည်ဟုသူကား, ဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ရှေ့မှာထိုကြောင့်သင်သည်ကောက်ခံ: ။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောရာသီအတွက်အဆင်သင့်နှင့်ရာသီထဲက Be စည်းရုံးသိမ်းသွင်း, ဆုံးမသောအပေါင်းတို့, စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်သင်ကြားရေးနှင့်အတူ ပေး. တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့။ "
အဆိုပါတရားဒေသနာ၏အနီးကပ်မှာတစ်ဦးဖိတ်ကြားချက်ကိုကိုတုံ့ပြန်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုမဆိုရန်တိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်သို့မဟုတ်အသင်းတော်၏ဆုတောငျးခွငျးအဘို့အမေးရန်, ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, သင့်လိုအပ်ချက်ကိုထင်ရှားစေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ပြုရေးတွင်ဝန်ဆောင်မှုခရစ်တော်၏အသင်းတော်များအဘို့အစဉ်အလာစဉ်းစားသည်။ ဒါဟာခေတ်ပြိုင်သို့မဟုတ်ဆာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဝိညာဉ်တော်နှင့်အမှန်တရားထဲမှာဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရန်ကြိုးစားကြသည်။
ယောဟနျသ 4: 24 "ဘုရားသခငျသသောဝိညာဉ်တော်သည်, ထိုသူကိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကိုစိတျဓာတျနဲ့အမှနျတရားကိုကိုးကှယျရမယျ။ "